【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】မကျြစိအာဟာရအကွောငျးသိကောငျးစရာ | Opinion Leaders
【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】မကျြစိအာဟာရအကွောငျးသိကောငျးစရာ
ပထမဆုံးအနနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့မကျြစိ အစဉျကနျြးမာနအေောငျ ဘယျလိုမြိုးအာဟာရတှေ မှီဝဲသငျ့လဲ ပွောပွပေးမှာဖွဈပါတယျ။ မကျြစိဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့အရေးကွီးဆုံး အစိတျအပိုငျး တဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မကျြစိကနျြးမာရေးဟာ အလှနျအရေးကွီးလှပါတယျ။ အစားအစာ ကို သငျ့တငျ့မြှတအောငျစားမယျဆိုရငျ....အထူးသဖွငျ့ လိုအပျတဲ့အာဟာရဓာတျကတော့ Carotenoid လို့ချေါတဲ့ အဝါရောငျ၊ လိမ်မျောရောငျ၊ အနီရောငျရှိတဲ့ အသီးအရှကျတှမှော အဓိက ပါဝငျတဲ့ ဓာတျတမြိုးဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ Carotenoid အမြိုးပေါငျး ၆၀ဝ ကြျော ရှိပွီးအဲ့ဒီထဲမှာမှ လူတဈယောကျ ကနျြးမာနဖေို့ မဖွဈမနစေားသငျ့တဲ့ Carotenoid တှကေ ၆ မြိုးပဲ ရှိပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ (၁) Beta-carotene
(၆) Asthaxanthin တှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ Carotenoid တှကေို လူတှကေ စားကွတဲ့အတှကျ မကျြစိမှာ အမွငျအာရုံ ပိုမိုကောငျးမှနျ စပေါတယျ။ Carotenoid တှစေားရငျ ဘယျလိုအကြိုး ကြေးဇူးတှရှေိပါသလဲ? အဓိက အကြိုးကြေးဇူး (၃) ခု ရှိပါတယျ။ (၁) UV Protection - နရေောငျခွညျရဲ့ဒဏျကနေ ကာကှယျ ပေးခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့မကျြစိထဲကို နရေောငျခွညျနဲ့အတူ ခရမျးလှနျ ရောငျခွညျ တှကေ ပထမ Lens လို့ချေါတဲ့ မှနျဘီလူးခုံးကိုဖွတျပွီး မကျြစိအတှငျးမှာရှိတဲ့ Retina လို့ချေါတဲ့ အမွငျအာရုံခံအလှာကို ရောကျပါတယျ။ အဲဒီကိုရောကျမှ အမွငျအာရုံကိုရတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ကွာရငျ နရေောငျမှာပါတဲ့ UV ကွောငျ့ Lens တှဟောလညျး တဖွညျးဖွညျးပကျြစီးလာပွီး တိမျစှဲလာပါတယျ။ အတှငျးမှာရှိတဲ့ Macula ဟာလညျး ပကျြစီးလာပါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေို ကာကှယျဖို့အတှကျ..... ဥပမာ သင်ျဘောသီး(သို့)မုနျလာဥနီကိုစားရငျ Carotenoid တှကေ Retina နဲ့ Macular မှာဆိုရငျ Lutein (လူတငျး) ရှိနပွေီး Fovea မှာ Zeaxanthin (ဇီဇနျသငျး) ရှိပါတယျ။
သူတို့တှေ လုံလုံလောကျလောကျရှိနရေငျ UV ရဲ့ဒဏျကနေ ကာကှယျပေးထားလို့ Cataract လို့ချေါတဲ့ မကျြစိတိမျစှဲတာတို့၊ AMD (Age-related Macular Degeneration) မကျြစိကှယျ ခွငျး မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးပါတယျ။ (၂) Antioxidant action –ခန်ဓာကိုယျထဲမှာရှိတဲ့ Free radical တှဟော မကျြစိကိုအမွဲဖကျြဆီးနပေါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေို ဖကျြဆီးနိုငျဖို့ Carotenoid တှလေိုပါတယျ။ (၃) မကျြစိအမွငျအာရုံရဖို့ ဗီတာမငျ အေ လိုပါတယျ။ လိုအပျတဲ့ဗီတာမငျ အေ ကို Carotenoid တှကေသာ ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ ဗီတာမငျ ‘A’ တညျဆောကျရာမှာ အဓိက ကုနျကွမျးတှေ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မကျြစိအမွငျအာရုံကို ကောငျးစဖေို့ဗီတာမငျ အေ ရရှိဖို့ Beta-carotene ကွှယျဝသော အစားအစာတှဖွေဈတဲ့ အဝါရောငျအသီးတှေ ဥပမာ သင်ျဘောသီး၊ ရှဖေရုံသီး၊ မုနျလာဥနီ စတာ တှေ စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိ အစဉ်ကျန်းမာနေအောင် ဘယ်လိုမျိုးအာဟာရတွေ မှီဝဲသင့်လဲ ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မျက်စိကျန်းမာရေးဟာ အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။ အစားအစာ ကို သင့်တင့်မျှတအောင်စားမယ်ဆိုရင်....အထူးသဖြင့် လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်ကတော့ Carotenoid လို့ခေါ်တဲ့ အဝါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အနီရောင်ရှိတဲ့ အသီးအရွက်တွေမှာ အဓိက ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ Carotenoid အမျိုးပေါင်း ၆၀ဝ ကျော် ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမှ လူတစ်ယောက် ကျန်းမာနေဖို့ မဖြစ်မနေစားသင့်တဲ့ Carotenoid တွေက ၆ မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ (၁) Beta-carotene
(၆) Asthaxanthin တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ Carotenoid တွေကို လူတွေက စားကြတဲ့အတွက် မျက်စိမှာ အမြင်အာရုံ ပိုမိုကောင်းမွန် စေပါတယ်။ Carotenoid တွေစားရင် ဘယ်လိုအကျိုး ကျေးဇူးတွေရှိပါသလဲ? အဓိက အကျိုးကျေးဇူး (၃) ခု ရှိပါတယ်။ (၁) UV Protection - နေရောင်ခြည်ရဲ့ဒဏ်ကနေ ကာကွယ် ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိထဲကို နေရောင်ခြည်နဲ့အတူ ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည် တွေက ပထမ Lens လို့ခေါ်တဲ့ မှန်ဘီလူးခုံးကိုဖြတ်ပြီး မျက်စိအတွင်းမှာရှိတဲ့ Retina လို့ခေါ်တဲ့ အမြင်အာရုံခံအလွှာကို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီကိုရောက်မှ အမြင်အာရုံကိုရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ကြာရင် နေရောင်မှာပါတဲ့ UV ကြောင့် Lens တွေဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာပြီး တိမ်စွဲလာပါတယ်။ အတွင်းမှာရှိတဲ့ Macula ဟာလည်း ပျက်စီးလာပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်..... ဥပမာ သင်္ဘောသီး(သို့)မုန်လာဥနီကိုစားရင် Carotenoid တွေက Retina နဲ့ Macular မှာဆိုရင် Lutein (လူတင်း) ရှိနေပြီး Fovea မှာ Zeaxanthin (ဇီဇန်သင်း) ရှိပါတယ်။
သူတို့တွေ လုံလုံလောက်လောက်ရှိနေရင် UV ရဲ့ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးထားလို့ Cataract လို့ခေါ်တဲ့ မျက်စိတိမ်စွဲတာတို့၊ AMD (Age-related Macular Degeneration) မျက်စိကွယ် ခြင်း မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ (၂) Antioxidant action –ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ Free radical တွေဟာ မျက်စိကိုအမြဲဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့ Carotenoid တွေလိုပါတယ်။ (၃) မျက်စိအမြင်အာရုံရဖို့ ဗီတာမင် အေ လိုပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် အေ ကို Carotenoid တွေကသာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် ‘A’ တည်ဆောက်ရာမှာ အဓိက ကုန်ကြမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မျက်စိအမြင်အာရုံကို ကောင်းစေဖို့ဗီတာမင် အေ ရရှိဖို့ Beta-carotene ကြွယ်ဝသော အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ အဝါရောင်အသီးတွေ ဥပမာ သင်္ဘောသီး၊ ရွှေဖရုံသီး၊ မုန်လာဥနီ စတာ တွေ စားသုံးသင့်ပါတယ်။